Warshadaha moodada iyo dharku waxay qaadeen jihooyin xiiso leh sanadkii la soo dhaafay. Qaar ka mid ah isbeddelladan waxaa kiciyay masiibada iyo isbeddellada dhaqameed ee laga yaabo inay yeeshaan saameyn joogto ah sanadaha soo socda. Iibiye ahaan warshadaha, la socoshada isbeddelladan waa daruuri buuxda. In t...Akhri wax dheeraad ah »
Dhoofinta dharka iyo dharka ee Shiinaha ayaa kor u kacday 9.9% Jan-Noofambar'20
Qiimaha dhoofinta dunta iyo dharka ee Shiinaha ayaa kor u kacday 9.9 boqolkiiba sannadkiiba ilaa $265.2 bilyan kow iyo tobankii bilood ee ugu horreeyay sanadkan, sida lagu sheegay xogta ay soo saartay wasaaradda warshadaha iyo tignoolajiyada (MIIT). Dhoofinta dharka iyo dharka labadaba waa la diiwaan geliyayAkhri wax dheeraad ah »
5 saadaasha warshadaha dharka ee 2021
Waa cadaalad in la yiraahdo qofna ma saadaalin karin sida uu noqon doono 2020. Intii aan filanaynay moodo cusub oo xiiso leh, horumar xagga sirdoonka macmal ah, iyo horumarka cajiibka ah ee waaritaanka, taa beddelkeeda waxaan helnay burbur ku yimid dhaqaalaha adduunka. Warshadaha dharka ayaa lagu dhuftay ha...Akhri wax dheeraad ah »
Warshadaha Daabacaadda Dharka Adduunka oo dhan ilaa 2027 - Saamaynta COVID-19 ee Suuqa
DUBLIN, Juun 9, 2020 /PRNewswire/ - Warbixinta "Daabacaadda Dharka - Warbixinta Suuqa Caalamiga ah & Falanqaynta" ayaa lagu daray wax bixinta ResearchAndMarkets.com. Iyada oo ay jirto xiisadda COVID-19 iyo hoos u dhaca dhaqaale ee soo socda, suuqa daabacaadda dharka ee adduunka ayaa geyn doona...Akhri wax dheeraad ah »